Jimco, Sept 11, 2020-Golaha Wasiirada xukuumadda xil gaarsiinta oo baab’iyey Barnaamijkii Tubaha Qaranka – LaacibOnline
Jimco, Sept 11, 2020-Golaha Wasiirada xukuumadda xil gaarsiinta oo baab’iyey Barnaamijkii Tubaha Qaranka
Si ka duwan dadka qaba in barnaamijka Tubaha lagu maroorsaday awoodihii Wasaaradaha, ayay xubno kale qabaan in barnaamijkani ahaa hab lagu qiimeyo meesha ay mareyso shaqada dowladda iyo wixii ka qabsoomay qorsheyashii loo dejiyay wasaradaha.
Barnaamijka Tubaha Qaranka ayaa ka koobnaa afar tubbood kuwaas oo kala ahaa; Tubta Horumarinta Dhaqaalaha, Tubta Amniga iyo Caddaaladda, Tubta Arrimaha bulshada iyo Tubta Siyaasadda loo dhanyahay. Tub walba oo ka mid ah barnaamijkan ayaa lahaa u qeysame u gaar ah, kuwaas oo qorshaha xafiiska ra’isulwasaaraha ku maamuli jiray wasaaradaha la hoos geeyay.
Ma cada sababta ku soo beegtay in xilligan meesha laga saaro barnaamijka Tubaha iyo in xukumadda xilka sii heysa ay ku bedelli doonto barnaamij kale.
← Mass exam failure stirs up a storm in Somalia
Tottenham striker transfer latest as club receive Patson Daka update and explore new targets →
Khamiis, Nov 26, 2020-Somaliland oo Lix ruux toogasho ku fulisay
December 19, 2019 Abdirisaaq 0